WARIYAHA IYO LAALUUSHKA: | RUUG-CADDAA
Hal cabbaar ah haddii aannu sugnay, ayaa naloo sheegay in Madaxwaynuhu diyaar yahay. NTV ayaa waraysigii ku hor maray. Deedna waxaa la soo gaadhay markayagii.
Madaxwaynuhu durba kaftan buu igu bilaabay, oo wuxuu yidhi: “War niyohow qoladii shahaada la dirirka iyo Safaaradda Maraykanka ayaan la il’ darannahay!” Kolkaas ayaa Wasiir Abdi Hashi oo sida gantaalka u duulayaa na soo dhexgalay, wuxuu yidhi: “Madaxwayne waxyar ii soo istaag” Goonni bay u faqeen!
Faroole markii uu igu soo laabtay, hore ayaan waraysigii ka bilownay, siwanaagsan oo aan leex-leex lahayn ayuu uga warramay arrimihii ugu cuslaa ee markaa taagnaa, #Budhcad-badeedda, Shahaada la dirirka, Somaliland iyo SSC.
Kolkii waraysigii dhammaaday Faroole wuxuu si cadho leh iigu yidhi “Aniga xukuumaddaydu laaluushkii wariyayaasha way joojisay. Haddii #Cadde_Muuse idin hagaajin jiray annagu arrintaas sharci darro ayaan u naqaan” Aad ulamayaabin hadalka Madaxwaynaha, waayo su’aalhaygii ayaa ahaa kuwo qadhaah, Waxanse si ixtiraamleh ugu caddeeyey: “Madaxwayne annagu laaluush kuma aannaan waydiin. Dawladdii kaa horaysayna laaluush kuma aannaan ogayn”
Kolkii aan xaruntii TV-ga tagnay, ee aan waraysigii Computer-ka ku shubnay, ayaa arrin layaab leh ku arkay. Kolkii uu Madaxwaynaha Cabdi Xaashi goonnida ula faqayey, show Microphone-kii Camera-da ayaa laabta u sudhnaa oo duubayey wixii ay goonida ugu faqeen!
Abdi_Xaashi ayaa wuxuu yidhi; “Madaxwayne qoladii NTV-Kenya ayaa ina sugaysa waxay rabaan lacagihii aan kula heshiinay TV-ga. #Faroolena wuxuu yidhi: “Haa sii lacagtooda way fiicanyihiin arrintii #Monitoring_group-ka su’aalo igamay waydiin!!!
Sawirka waxaa qaaday: Cabdi Raxiin Darbo.
Abdirashid M. Hadhin
« 2 diyaaradood oo isku dhacday, xadka Talyaaniga iyo Faransiiska
Igarre iyo muuqaal cusub oo qosol badan daawo (VIDEO) »